Fadeexo ka dhalatey Dagaalkii Baled-xaawo Askar la laayey iyo qaar la siidaayey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaalkii kadhacey degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi dad gaar ah lagu beegsadey kadib markii ay DF federalka Dib ula wareegtey.
Col. Cabdullahi Dheere Teliyaha Hogaanka Dabagalka oo lagu tilmaamo Fileka madow ee MD Farmaajo ayaa lasheegey in uu amar ku bixiyey in la dhameystiro 13 askari oo ku dhaawacmey Dagaalka kana tirsanaa ciidamada Jubaland kadib markii ay isku soo dhiibeen ciidanka DF fderalka Soomaaliya ayagoo dhaawacyo qaba si loo bedbaadiyo.
muuqaalo ay duubeen Askar katirsan ciidanka ilaalada shacabka ee sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo ka amar qaata Col. Cabdullahi Dheere ayaa qabsadey baraha bulshada, muuqaalka ayaa lagu dhex arkayey askar dhaawac ah oo dhuulka jiifa kuwaas oo xirxiran waxaana garaacayay ciidamada ilaalada shacabka oo markii dabe lasheegey in ay toogteen dhamaan ciidanka la garaaceyey hubkana ka qaateen.
Dhicakale Col. Cabdullahi Dheere ayaa amar ku bixiyey in lasii daayo wadana ay ka baxaanna lashiiyo 35 askari oo Jubaland katirsanaa kuwaas oo ciidamada Dowlada Ku Xareereeyey bartamaha magaalada Beled Xaawo kadib markii laga itaal roonaadey ciidankii Jubaland oo ay lasocdeen.
Mid kamid ah saraakiishii dagaalka Hogaamineysey ayaa lasheegey in uu ka biyo diidey in ciidanka qaarna la toogto qaarna la fasaxo, waxaana loo taxaabey Xabsiga isagoo lagu eedeeyey in uu ku dhaqaaqey amar diido xilli dagaal socodo si ay noo xaqiijiyeen saraakiil katirsan Xoogga dalka oo magacooda qariyey. Ilo Xog ogaal ah ayaa sheegaya in ciidanka lafasaxey ay ku heeb ahaayeen Col. Cabduullahi dheere halka kuwa latoogteyna la sheegey in ay kasoo jeedaan beelaha kale ee dega deeganada Jubaland. arintaan ayaa fadeexad ku ah Ciidanka Qalabka sida ee soomaaliyeed in qaarna loo ugaarsado beel ahaan qaarna laheybsado oo la bedbaadiyo.